घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको फेब्रुअरी 1, 2020
LB एक फुटी जीनियस उपनामको कहानी प्रस्तुत गर्दछ "गनस्लिgerर“। यो Krzysztof Piatek बचपन कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्यहरू, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज हो जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
Krzysztof Piatek को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँको उत्कृष्ट गोल-स्कोरिंग फाराम र गनस्लिing्ग समारोहहरू। अझ यति, कि उहाँ एक प्रशंसक सितारा साथी संग तुलना द्वारा चापलिएको छ रबर्ट लुवेन्डोस्की। जहाँसम्म, केहि थोरैले क्रिजिस्टोफ पिएटेकको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
हडताल बल Krzysztof Piątek जुलाई १ 1 1995 July को पहिलो दिन पोल्याण्डको डिजिरोनिओ शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो सानो चिनिएको आमा र बुबा Wadadłąaw Piątek को जन्म भएको थियो।
Krzysztof Piatek का आमा-बुबा मध्ये एक भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: मार्का।
के तपाईंलाई यो थाँहा छ कि पोलिश देशीय यूरोपीयन परिवारको उत्पत्तिसँग लेकिटिक जातीयता हो? अझ चाखलाग्दो कुरा यो हो कि उहाँ हुसेरजोनिनोको गाउँ नाइसमजामा हुर्केका थिए जहाँ केवल दुई फुटबल मैदानहरू छन् किनभने इलाकामा सबैभन्दा बढी अभ्यास गर्ने खेलहरू पौडी खेल्ने र बोकी हुन्।
जे भए पनि, Krzysztof Piatek को परिवार फुटबल प्रेमी भएको छ। युवा पिएटेक फुटबल खेल मायालु हुर्किए, एक खेल उनले दुई बर्षको उमेरमा खेल्न शुरू गरे। बढी के? ऊ आर्सेनल एफसीको बाल्यावस्था फ्यान थियो जसले मनपरायो आर्सेन वेंजरखेल को शैली र प्रशंसनीय महापुरूष को जस्तै डेनिस बर्गकोम्प र थियरिरी हेनरी.
डेनिस बर्गक्याम्प र थियरी हेनरी युवा क्रिजिस्टोफ पिएटेकको बाल्यकालका मूर्तिहरू थिए। छवि क्रेडिट: TheSun।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
पिएटेकले आफ्नो क्यारियर निर्माणको शुरूआत नीमस्कान्की नीमजामा गरे। यो क्लबको बच्चाहरूको समूहसँगै थियो जुन युवा 'गन्सलिgerर' ले २०० club मा स्थानीय क्लब - डिज्युइष्ट्का डिजेरोनिवमा सर्नु भन्दा पहिले एक छोटो अवधिको लागि प्रशिक्षण दिए।
स्थानीय क्लब Dziewiątka Dzierżoniów मा युवा फुटबल उन्मत्तको बाल्यकालको फोटो। छवि क्रेडिट: Przegladsportowy।
डिजिएट्का डिजेरोनिवमा हुँदा, पिएटेकले रमाइलो प्रशिक्षणमा धेरै लगानी गरे कि उनले आफ्नो युवा जीवनको धेरैजसो वर्षहरू (२००-2006-२०११) क्लबमा बिताए मुख्य स्थानीय क्लब लेचिआ डिजेरोनिवमा प्रवेश गर्नु अघि।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
यद्यपि पिएटेक १aवर्षको मात्र थिए जब उनी लेचिया डिजेरोनिउमा सामेल भए, उनले राम्रो स्कोरि form प्रदर्शन गरे जुन उनका युवा व्यवस्थापकहरूले उनलाई क्लबको वरिष्ठ पक्षका साथ चिन्तित गर्न चिन्तित तुल्याए।
ऊ लेछिया डिजेरोनिवको किशोर किशोरीहरूको अनुभूति थियो। छवि क्रेडिट: Przegladsportowy।
यद्यपि यो फुटबल खेलाडी १ 17 वर्ष नाघिसकेपछि मात्र उनले २०१२–२०१ season सत्रमा क्लबको साथ वरिष्ठ पदार्पण गरे र पोलिश पेशेवर क्लबहरू जागाबी लुबिन (जसलाई उनले पदोन्नति प्राप्त गर्न मद्दत गरे) को लागी एक बहुमूल्य सम्पत्ति बन्न पुगे। क्र्याकोभिया।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
२०१ 2018 साल हो जुन पिएटेकको उनको क्यारियरमा एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो किनकि उनी क्र्याकोभियाबाट इटालियन पक्ष जेनोवाले हस्ताक्षर गरे। भोकाएको ब्वाँसोले शिकार गर्न छाडेर पियाटेकले चाँडै इटालियाको कप र लिगमा गोल गरेपछि गोल गरेर इटाली जित्ने तयारी गरे।
जेनोवामा सम्मिलित भएको पहिलो पटक हो कि उसले पोलिश लीग छोडेका साथसाथै उसको लागि नयाँ शुरुआतको बिहान। छवि क्रेडिट: ट्विटर।
ऊ कुनै समय मा एक स्कोरिंग सनसनी भयो र धेरै इटालियनहरूले उहाँलाई प्रेम गर्थे। बच्चाहरूले पिएकको गोल इशाराको नक्कल गर्न थालेपछि बच्चाहरू छोडिएनन् जबकि उनको बजार मूल्यवान खगोलीय अनुपातमा बढ्यो।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
२०१/2018/२०१ season सिजनको अन्त्यसम्म, जेनोवा - जसले पिएटेकलाई million million मिलियनमा हस्ताक्षर गर्‍यो - बैंकमा हाँस्नका कारणहरू थिए किनभने उनीहरूले उनलाई बेचे मिलान million 35 मिलियन को एक ठूलो लाभदायक शुल्क को लागी! अपेक्षित रूपमा, Piatek दिन मा गए मिलान आफ्नो पैसा को लागी मूल्य र को लागी सही प्रतिस्थापन को रूप मा सेवा गोन्जालो हिगुआन जो चेल्सीमा सामेल भए। उनले मिलापको दोस्रो उपस्थितिमा २-२० २०१२ कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनलमा नेपोली बिरुद्धको जीतमा दुई पटक गोल गर्दा पनि स्थायी ओभन पाए।
उसको गोलले मिलानलाई २०१२ कोपा इटालिया प्रतियोगिताको सेमीफाइनलमा पठायो। छवि क्रेडिट: गोल।
यो बायो लेख्ने समयमा छिटो अगाडि, अ T्ग्रेजी पक्ष टोटेनहमले सनसनीखेज अगाडि हस्ताक्षर गर्ने योजनाहरू सही गर्दैछन किनकि तिनीहरूको हड्ताललाई चोटपटकले कमजोर पारिएको छ हैरी केन। स्थानान्तरण पिचेकले पछिल्लो समयमा ब्याक अपका लागि घटाइएको थियो भन्ने तथ्यलाई दिएर हेचहरू बिना हिड्ने आशा गरिन्छ Zlatan Ibrahimovic, एक विकास जसले उसलाई समय खेल्नमा लुकिहाल्छ र उसको मनोबललाई धमिलो पार्दछ।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
Krzysztof पिएटेकको उत्साहजनक क्यारियर जीवनबाट टाढा, उहाँसँग एक अद्भुत प्रेम जीवन छ जुन उनको प्रेमिकाले बनेकी पत्नी पाउलिना प्रोकिकले सुन्दर बनाएको छ। पाउलिना पिएटेकको श्रीमती मात्र होइन ब्ल्गर, इन्स्टाग्राममा फेसन प्रभावकर्ताका साथै वकील पनि थिइनन्।
पिटेकले आफ्नी पत्नी पालिनालाई कसरी भेट्यो भन्ने बारे धेरै थाहा छैन तर उनीहरूले कहिले बिवाह गरे हामीलाई थाहा छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यस्तो अद्भुत प्रोफाइलको साथ, यो आश्चर्यजनक छैन कि पिएटेकले १ जून २०१5मा उनीसँग गाँठो बाँध्नु अघि ina बर्ष भन्दा बढीको लागि पाउलिनालाई उनको प्रेमिका बनायो। दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै बच्चाको जन्म भएको छैन - लेखनको समय - ती दुवैले दुबै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) लाई विवाहबाट बाहिर राखेका छन्।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
फुटबल प्रतिभा रातारात उत्तेजित हुँदैन। तिनीहरू पिएटेकजस्ता छन्, एक समर्थन परिवार द्वारा हुर्केका। हामी तपाईलाई Krzysztof Piatek को पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू उसको आमा बुबाआमाबाट ल्याउँदछौं।
Krzysztof Piatek बुबा र आमाको बारेमा: Władysła Piątek Piatek को सहायक बुबा हुनुहुन्छ जबकि फुटबलरको आमाको बारेमा धेरै थाहा छैन जो कथित ढिला छ। वाडियास्वा इटालियन र पोलिश फुटबलमा व्यापक रूपमा चिनिन्छ पिएटेकका आमा बुबा मात्र होइन तर फुटबलमा अग्रगामीको रुचिको कडा प्रवर्तक। पिटेकले उनलाई कडा मेहनत गर्न, उनको सपनाहरु साकार पार्न र एकै समयमा आफ्नो खुट्टा भुइँमा राख्न लगातार सल्लाह दिइरहेका छन्।
Krzysztof Piatek अभिभावक मध्ये एक को एक दुर्लभ तस्वीर (उसको बुवा Władysław) आफ्नो हस्ताक्षर गोल सेलिब्रेशन पोजको अनुकरण गर्दै।
Krzysztof Piatek भाई / बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे: क्रिजिज्टोफ पिएटेक आफ्नो आमाबुबामा जन्मेका एकमात्र बच्चा हुन सक्छन् किनभने त्यहाँ उनका दाइ / दिदीबहिनीको कुनै रेकर्ड छैन, न त उसले अन्तर्वार्तामा कुनै भाइ वा बहिनीको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यस्तै गरी, यस फर्वार्डको पुर्खा र पारिवारिक जराको बारेमा खासै केही छैन, विशेष गरी उसको बुवा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको पहिचान जबकि उनका काकी, काका, भतिजा र भतिजीहरू अझै यो बायो लेख्ने क्रममा चिन्न सकेनन्।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
Krzysztof Piatek लाई कुन चीज बनाउँछ र उनको अफ-पिच व्यक्तित्व कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? यो पाठको लागि आफ्नो आँखा फीड गर्न को लागी एक उपयुक्त क्षण हो कि केवल हड्तालको व्यक्तित्व को बारे मा तथ्यहरु प्रकट गर्दैन तर तपाईं उनको एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न सहयोग। सुरू गर्न, Krzysztof Piatek व्यक्तित्व क्यान्सर राशि चिन्ह द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन दर्शाउँछ।
ऊ महत्वाकांक्षी, भावनात्मक रुपमा बौद्धिक, लचिलो छ र मध्यम उसको व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्यहरु प्रकट गर्दछ। फरवार्डको रुचि र शौकमा संगीत सुन्नु, उनकी पत्नी पालिना प्रोकिकसँग भिडियो गेम खेल्नु, चलचित्रहरू हेर्नु, यात्रा गर्नु र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
दम्पती गोलहरू: पिएटेक र तिनकी श्रीमतीको भिडियो गेम खेल्ने साधारण शौक हुन्छ। छवि क्रेडिट: ट्विटर।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
Krzysztof पिएटेकको खर्च गर्ने बानी र पैसा कमाउने प्रयासहरूको लागि अघि बढ्दै, ऊ माथि उडान फुटबल खेल्नको लागि तलब र ज्यालामा धेरै राम्रो कमाउँछ जबकि अनुमोदनहरू उसको नेटवर्थको लागि एक अतिरिक्त स्ट्रिम बनाउँदछ जुन यो बायो लेख्ने समयमा समीक्षा अन्तर्गत छ।
जे होस्, पिएटेक विलासी जीवनशैली बिताउँछन् जुन उसको महँगो रिसोर्टमा छुट्टीहरू खर्च गर्ने क्षमतामा प्रस्ट देखिन्छ। यद्यपि उनी इटालीमा बस्छन् घर वा अपार्टमेन्टको मूल्य भने अज्ञात छ, उहाँसँग लक्जरी सवारी कारहरू छन् र कहिलेकाँही चालकहरूले उनलाई चलाउँछन्।
त्यहाँ केहि फुटबल स्टारहरू छन् जसले उनीहरूका लागि कारहरूको ढोका खोल्यो। पिटेकले सूची जाँच गर्दछ। छवि क्रेडिट: TheSun।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस जीवनी लपेट्न, यहाँ स्ट्राइकरको बारेमा अनकटेल वा कम ज्ञात तथ्यहरू छन्।
जियोवानी उपनाम को बारे मा: त्यहाँ केहि खेलाडीहरू छन् जसको उपनाम तिनीहरूको शैलीको उत्सवको साथ सिnc्कमा छ र पिटेक ती मध्ये एक हो। यस फरवार्डलाई 'द गन्सलिंगर' उपनाम दिइएको थियो किनभने जब उहाँ स्कोर गर्नुहुन्छ तब उहाँ बन्दुकको गोलीबारीको वाइल्ड वेस्ट उत्सव इशारा गर्नुहुन्छ।
जब तपाइँको मनपर्ने फुटबलर को उपनाम उसको उत्सव शैली जस्तै छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धुम्रपान र मदिरा: Krzysztof Piatek यो बायो लेख्ने समयमा धूम्रपान गरिरहेको छैन। यद्यपि उसले विशेष अवसरहरूमा साथीसहित, साथीहरू र परिवारसँग जिम्मेवारीपूर्वक रक्सी पिउँछ।
ट्याटूहरू: जियोवानी लो सेल्सो जस्तै, Krzysztof Piatek लेख्ने समयमा कुनै ट्याटू छैन। यद्यपि त्यहाँ लोकप्रियता कल्पना गर्न नसकिने उचाइमा पुग्दा ऊ शरीर कला हासिल गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न मिल्दैन।
Krzysztof Piatek ट्याटो तथ्य- प्रमाणित कि उहाँसँग लेख्ने क्रममा कुनै ट्याटू छैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: हो, क्रिजिस्टोफ पिएटेकको कडा नामहरू देखिन्छन् जुन उनीहरूको धर्मलाई आंकडा बनाउन गाह्रो बनाउँदछ। यद्यपि उनकी पत्नी पालिनासँग इसाई नाम भएको छ, तर क्रिजिस्टोफ पिएटेकका आमाबुबाले उनलाई इसाई धार्मिक विश्वासमा हुर्काएकी हुन् भन्ने कुरा निश्चित छैन।
FIFA रेटिंग्स: के तपाईंलाई थाहा छ Krzysztof Piatek का उचित रेटिंग IF२ को फिफा २०२० मा छ? रेटिंग बढाउनको लागि सेट गरिएको छ कि स्ट्राइकरले फाराम हराउन को लागी एक होईन, विशेष गरी विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी लीगहरू मध्ये एक उनको आसन्न चाल नजिकै।
उसको रेटिंग्स माथि र बढेको छ। छवि क्रेडिट: यूट्यूब।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।